बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्धको २०० औं वर्षगांठ भव्य मनाउने तयारी | We Nepali
बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्धको २०० औं वर्षगांठ भव्य मनाउने तयारी
२०७२ मंसिर २२ गते १०:१८
लन्डन । बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको २ सय औं वर्ष गांठ भव्य रुपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । लन्डनस्थित बेलायती विदेश मन्त्रालय (एफसीओ) मा आगामी १६ डिसेम्बर सांझ एक समारोहबीच वर्ष गांठ मनाउने तयारी भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा १५ डिसेम्बरका दिन लन्डन उत्रने दूतावास श्रोतले जनाएको छ ।
एफसीओले कार्यक्रममा सहभागी हुन लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत बेलायतको नेपाली डायष्पोरालाई आमन्त्रण गरिसकेको छ । बेलायतस्थित प्रमुख नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, वुद्धिजिवी, पत्रकार लगायत बढिमा पांच दर्जनलाई समारोहमा निम्त्याइएको छ ।
नेपालसंग बेलायतको कुटनीतिक सम्वन्ध सन् १८१६ मा स्थापना भएको हो । नेपाल बेलायतसंग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो मानिन्छ । नेपालले सन् १९३४ देखि लन्डनमा दूतावास समेत स्थापना गरेको छ ।
सन् १९७९ यता बेलायत बस्दै आएका समाजसेवी चिकित्सक डा. राघवप्रसाद धिताल (ओविइ) इतिहास पढेर र व्यवहारबाट पनि बेलायत नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र भएको बताउंछन् । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा बेलायतको निरन्तर सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै डा. धितालले तत्कालीन समयमा ब्रिटिश सेनामा गोर्खालाई भर्ती लिएर बेलायतले गोर्खा र देशको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको स्मरण गरे । ‘हामीले दुवै देशको गुन बिर्सनु हुन्न’, धितालले भने, ‘तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला बेलायतले मोदीसंग कुम जोडेर जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसले म जस्ता धेरै नेपालीको मन दुखेको छ ।’
बेलायतले वर्षेनी करिब १०५ मिलियन पाउण्ड सहयोग गरेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र भएबाट पनि दुई मुलुकबीचको प्रगाढ सम्बन्ध झल्कने बताउंछन् कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री । उनले बेलायतले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासदेखि शान्ति प्रक्रियामा समेत विशेष योगदान गरेको स्मरण गरे । गत बैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि बेलायतले नेपाललाई मानवीय सहायता स्वरुप ७० मिलियन पाउण्ड सहयोगको प्रतिवद्धता गरेको थियो ।
कुटनीतिक सम्वन्ध जोडिएपछि दुई मुलुकका उच्च ओहोदाका कयौं व्यक्तित्वले बेलायत र नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । सन् १८५२ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर कुंवरले पहिलो बेलायत भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालबाट कयौं पटक बेलायतको राजकीय भ्रमण भएका छन् । सन् १९०८ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणा बेलायतको राजकीय भ्रमणमा आएका थिए । सन् १९६० अक्टोबरमा तत्कालिन राजा महेन्द्र तथा सन् १९८० र ९५ मा वीरेन्द्रको समेत यहां सवारी भएको थियो । त्यसैगरि, राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमल सन् २००३ मा निजी भ्रमणमा बेलायत आएका थिए ।
सन् १९९५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, सन् १९९६ र २००२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि ब्रिटेनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
तत्कालिन सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट, उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधान सेनापतिहरु प्यारजंग थापा, छत्रमानसिंह गुरुङ, रुक्मांगत कटवाल जस्ता वरिष्ठ व्यक्तिहरुको पनि भ्रमण भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय पनि विभिन्न मन्त्री, नेता, सभासदहरुको औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमण निरन्तरता कायमै छ ।
बेलायतबाट महारानी एलिजावेथ द्वितिय र प्रिन्स फिलिपले सन् १९६१ र १९८६ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । राजकुमारी डायना, प्रिन्स चाल्र्ससहित बेलायती मन्त्रीहरु धेरैले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । यद्यपि, बेलायती प्रधानमन्त्रीको भने इतिहासमै एकपटक पनि नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन् । दूतावासले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन नेपाल जान इच्छुक रहेको बताउने गरेपनि भ्रमण चाहिं अझै तय हुन बांकी छ ।